भूगोलको भर- विविधा - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — केही वर्षअघि यलमाया केन्द्रमा नेपालमा महिला आन्दोलन सम्बन्धी झन्डै बीस वर्षको अनुभव र विश्लेषण सुन्न पुगियो  । करिब एक घन्टाको श्रवणपछि मेरो प्रश्न थियो, नेपालको महिला आन्दोलनले भूगोलको आयामलाई कसरी बुझेको छ ? सोचे विपरीत कार्यक्रम प्रस्तोताले उक्त प्रश्न नकार्नुका साथै उल्टै मलाई अन्य आरोप लगाए  ।
खैर उक्त आरोपतिर नगई भूगोलको आयामलाई नेपालको महिला आन्दोलन तथा महिला आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नकारेकोबारे चर्चा गरौं । भूगोलको महत्त्व किन छ र हरेक आन्दोलन र विशेषगरी महिला जनजाति आन्दोलनले उक्त आयामलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर केलाइएको छ ।
लन्डन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डेभिड मार्शल स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘जियोग्राफी र सोसल जस्टिस (१९९४)’ मा भूगोल र सामाजिक न्यायको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकारेका छन् । मानव भूगोलको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षलाई छुट्याउन नमिल्ने उनको तर्क छ । स्मिथका अनुसार सामाजिक न्याय र अन्यायको सवाल र हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनको आयु ऊ जन्मेको ठाउँ, देश, प्रदेश र सहरसँग जोडिएको हुन्छ । हरेक देश र ‘स्पेस’हरूमा विभिन्न कालखण्डदेखि विभेदपूर्ण स्रोत र साधनको वितरण र पहुँचले विभिन्न वर्ग, लिंग, जातजाति र धर्मका व्यक्ति तथा समाजहरूको अनुभव र संघर्ष भिन्न–भिन्न हुने उनको तर्क छ । सामाजिक तथा नैतिक सिद्धान्त शास्त्रमा समेत मानव भूगोलको पक्षलाई नकार्न नमिल्नेमा जोड दिन्छन् उनी ।
लेखक तारिख जजिल र प्रोफेसर स्टेफन लेग ‘सबअर्ल्टन जियोग्राफिस (२०१९)’ अनुसार भूगोलको ‘स्प्यासियल रजिस्टर्स’, ‘मोडालिटिज’, ‘लोकेसन्स’, ‘टर्याजक्टरिज’ र ‘इम्याजिनरी ज्योग्राफिज’ (जुन उपनिवेशीकरण र उपनिवेशीकरणको संस्कृति र सञ्जालको प्रमुख माध्यम थियो) बिना रनजित गुहाले सुरु गरेको सबअर्ल्टनको सही इतिहास र संघर्षको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरू अधुरै हुन्छन् । किनभने यिनै स्पेसहरूमा विभिन्न सिमाना र किनाराकृत सामाजिक सम्बन्ध र राजनीतिक तथा बौद्धिक अन्तरक्रियाहरू ठोक्किन्छन् र परिस्कृत हुँदै जान्छन् । र त्यसै अनुसार समाज परिवर्तन र न्याय–अन्यायका विश्लेषणहरूमा ज्ञान निर्माणका आयामहरू थपिँदै जान्छ । अहिलेको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनमा आएर नेपालमा निर्माण भएका विभिन्न स्पेसहरू जोसेफ कर्न्याडले भनेको जस्तैमात्रै हो कि अफ्रिकी लेखक चिनुवा अचेबेले उद्घोष गरेको धनी बुर्जुवाको स्पेस वा अरु नै हो, पहिल्याउन आवश्यक छ ।
नेपालमा भूगोलका आयाम बुझ्न मुलुकका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका भूभागमा छरिएर रहेका विभिन्न समुदाय र तिनीहरूको भूगोलसँगको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, लैंगिक तथा राजनीतिक सम्बन्धबारे उजागर गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि मारियता काइण्डले आफ्नो विद्यावारिधिको विषयलाई निरन्तरता दिँदै ‘बोन ल्यान्डस्केप अफ डोल्पो (२०१४)’ मा डोल्पो समुदायका बोन धर्मावलम्बीहरूको विभिन्न तीर्थ, गुम्बा तथा लामाहरूको जीवनीमा समेत भूगोलको महत्त्व रहेको चर्चा गरेका छन् । किताबको अध्ययन विधि अर्काइभल तथा पुरुषले लेखेको इतिहासमा सीमित भएकाले डोल्पो महिलाहरूको अनुभव खासै समेटिइएको छैन । डोल्पो समुदायमा विभिन्न गाउँमा छरिएर रहेका पुरुष, महिला र केही क्वेयर (ट्रान्स जेन्डर) र उनीहरूको सम्बन्ध, अन्तरक्रिया र असमानताको विश्लेषण भूगोलको दृष्टिकोणबाट गर्नै नसकिने होइन ।
सन् १६७५ मा जन्मेकी सुरुमा खिलोङ भनेर चिनिएर पछि आनी छोइकी भएकी आनी आफैंले डोल्पो भाषामा लेखेको जीवनीमा पनि भूगोलले असर पारेका संघर्ष र कविता पढ्न सकिन्छ । सन् २००४ मा आनीको जीवनीलाई अंग्रेजीमा भर्जिनियाँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर कर्टिस स्याफरले ‘हिमालयन हर्मिटेस’ भनेर प्रकाशनमा ल्याइसकेका छन् । लैंगिक तथा भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको नेपालको राजनीतिक सिमानाभित्र पर्नु अघिको केही मात्रामा पित्तृसत्तात्मक डोल्पो समाज र त्यसमा भूगोलले पारेको असरबारे आनीको जीवनीले चित्रित गर्छ । यस्ता जीवनी र संघर्ष नेपालका अरु किनाराकृत समुदायहरूमा पनि भेटाउन किन सकिँंदैन र ?
नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भूगोलको आयामलाई बिर्सन मिल्दैन । झापा आन्दोलन होस्, सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ या मधेस तथा थरुहट आन्दोलन नै । ती आन्दोलन सफल बनाउन झापा, रुकुम, जनकपुर तथा कञ्चनपुरको भूगोलका विभिन्न स्पेसहरूले पुरुष र महिलालाई पारेको परिवर्तनको महत्त्वलाई बिर्सन कसरी मिल्ला ? नेपालको भूगोलबारे अध्ययन नभएको हैन । एउटा बिर्सन नमिल्ने नाम डा. हर्क गुरुङ हो । भारतको पटना विश्वविद्यालयमा स्नातकोक्तर र संयुत्त अधिराज्यको एडिनबर्ग विश्वविद्यालयमा गुरुङले विद्यावारिधि गरेको विषय भूगोल नै हो । सन् १९६८ देखिको योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयको संलग्नताबाट पनि गुरुङले भूगोलको राजनीतिक विषयलाई राम्ररीबुझेका थिए । नेपालमा बढ्दो प्रवासीकरणको विभिन्न आयाममध्ये क्षेत्रीय असमानता (रिजनल डिस्प्यारिटी) पनि एक हो । यसै असमानताले विभिन्न ठाउँमा मानव स्रोत अभाव हुने भनेर गुरुङले सन् १९८९ मा निक्लेको नेपालमा बसााइँ–सराइको क्षेत्रीय खाकामै स्वीकारिसकेका थिए । साथै नेपालमा विकासको पक्षलाई विश्लेषण गर्दै सन् २००५ मा अस्थायी परिवर्तन र स्थान विशेषको असमानतालाई ‘नेपालको विकासका निम्ति क्षेत्रीय रणनीति’मा थप प्रकाश पारेका थिए ।
नेपालको महिला आन्दोलनमा चाहिँ भूगोलको महत्त्व किन नकार्ने ? यहाँ महिला आन्दोलनका रूपमा जातजाति, वर्ग र लिंग ‘क्याटगोरी’ को अन्तरनिहित पहिचानलाई मात्र बुझेको देखिन्छ, खासगरी सन् १९९० को सार्वजनिक वृत्तमा नेपालको महिला आन्दोलन र सन् २००० पछिको सांगठनिक रूपमा आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको सुरुवातसँगै । विश्लेषक सियरा तामाङको तर्क अनुसार राज्यको निरन्तर असमावेशी चरिक्र र नीतिगत कार्यत्रम र संविधानबाट समेत सबै महिलालाई ‘होमोजिनाइज’ गर्दै विभिन्न महिलाको शरीर, इतिहास र संघर्षहरूलाई एउटा नेपाली महिला हो भन्ने दुष्प्रयास भयो ।
राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न महिलालाई एकै ठाउँमा आउन सहज भए पनि पहुँच र स्रोत बाँडफाँडको हिसाबले केही सीमित महिला समुदायमा मात्रै सफलता सीमित भएको तर्क पनि छ । लेखक प्रणिका कोयुका अनुसार आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनहरूले फेरि त्यसै बाहुनवादी ज्ञान निर्माण नीतिलाई निरन्तरता दिंँदै एकल आदिवासी जनजाति महिलाको संकुचित श्रेणीको निर्माण गरेका छन् । नब्बेको दशकसँगै नेपालको आदिवासी जनजाति पुरुष तथा महिला आन्दोलनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्धले आन्दोलनकारीहरू राजनीतिक मुद्दाबाट विमुख भएको बिर्सन नमिल्ने पाटो भएको उनी स्वीकार्छिन् । लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता कैलाश राईका अनुसार आदिवासी जनजाति महिलाले त्रिपक्षीय विभेद (महिला, जनजाति र जनजाति महिला भएर) सहेका छन् । विगतका अनुसन्धानका दायराहरू विशेषगरी काठमाडौं र मोटरबाटो पुगेसम्मका महिला समुदायसम्म सीमित भएकाले अपूरो विश्लेषण भएको छ । त्यस कारण पनि सामाजिक न्यायको वैचारिक पक्षबाट भूगोलको आयामहरू छुटेको उनले स्वीकारेकी छन् ।
नेपालको समग्र आन्दोलनलाई बुझ्दा भूगोलको आवश्यकताबारे छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ । चाहे त्यो नेपालको महिला आन्दोलन वा आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनले नै किन नहोस् । वर्ग, जातजाति, लिंगमात्र भन्दा पनि भूगोलको थप आयामलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ । परिवर्तनशील समाजको सही विश्लेषण भनेकै यथार्थको नजिक पुगी समग्र पुरुष, महिला र ट्रान्स जेन्डरहरूको संघर्ष, अन्तरक्रिया र सम्बन्धबाट निर्माण भइरहेको ज्ञानको आत्मसात गनु हो । अनि मात्रै हामी न्यायिक समाजको चित्रण नजिकै पुग्छौं होला ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ ०८:५४
चैत्र २३, २०७५ कमल मादेन
काठमाडौँ — हिमालहरू आफूमात्रै उभिएका छैनन्, सिंगो हिमाली सभ्यता बोकेर बसेका छन्  । हिमाल भनेको चुचुरोमात्र होइन, त्यस भेगको जनजीवन र जैविक विविधता पनि हो  ।
हामी धेरैलाई हिमाल थाहा छ, त्यहाँको परिवेशबारे जानकारी छैन । जस्तो– हामीलाई अन्नपूर्ण हिमाल प्रथम थाहा छ । फ्रान्सका माउरिस हर्जोग र लुइस लाकाहेनलले सन् १९५० मा अक्सिजन बेगर संसारको १० औं अग्लो यो चुचुरो सफल आरोहण गरेका थिए । यही हिमाल उभिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको परिवेशबारे भने कमै जानकारी छ ।
५५३.३८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको ५१ प्रतिशत भूभाग अर्थात २८३.२२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र वनजंगलले ढाकेको छ । वडा ४ ले गाउँपालिकाको झन्डै २ तिहाइ ओगटेको छ । अन्नपूर्ण हिमाल प्रथमबाट सोही वडाको नार्च्याङ लेकगाउँ सबैभन्दा नजिकको बस्ती हो ।यो पंक्तिकार नार्च्याङ लेकगाउँ २०७४ पुसमा पहिलोपटक पुगेको थियो । कालीगण्डकीको एक भँंगालो मिष्ट्री खोलाको पूर्वतर्फ अवस्थित यो गाउँको उत्तर, पूर्व र दक्षिण तीनैतिर जंगल छ । स्थानीय बासिन्दा जंगल पस्दा भालुसँग जम्काभेट होला कि भन्ठानी पिरोलिने रहेछन् । उनीहरू भालु आक्रमणमा पर्ने रहेछन् । भालुको आक्रमणबाट बाँच्न सफल एक गोठाला बेलबहादुर पाइजा पुनसँग भेट भयो । तिनी पुस्तैनी गोठाला रहेछन् । गाई, भैंसीसँगै जंगलमा गोठगरी बस्नु तिनको दिनचर्या रहेछ ।
बेलबहादुर पाइजाले पुसमा २ हजार मिटर उचाइको लेकगाउँ नजिक एक फाँटमा गोठ ल्याइपुर्‍याएका थिए । फागुनको सुरुदेखि मंसिरसम्म गोठ त्यसभन्दा उचाइको जंगलतर्फ सारिँंदो रहेछ । तिनले पहिलो भेटमा कुरा गर्न रुचाएनन् । मलाई तिनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना ‘एक्याप’ कारिन्दा भन्ठानेछन् । भालुले टोक्दा एक्यापबाट सहयोग नपाएको दुखेसो रहेछ । भोलिपल्ट फेरि भेट भयो । कुराकानी गर्न आफू एक्यापको कारिन्दा नभएको पुष्टि गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि एक क्वाटर रेडिमेट रक्सी किनिदिन आग्रह गरे । तिनले रक्सीसँग हरियो खुर्सानी टोक्दै भालु आक्रमणका घटना सुनाए ।
६ वर्ष पहिले, बेलबहादुर एकाबिहानै डोकोमा दूध, घ्यु, जंगलमा पाइने तरकारी बोकेर गाउँ झर्दै थिए । बाटाको कुइनेटोमा एक्कासी भालुसँग जम्काभेट भयो । डोको फाल्न नपाउँदै दुवै पञ्जाले अनुहारमा चिथोर्‍यो । एकाध सेकेन्डमै टाउको रगतपक्ष भयो । उम्किन सक्ने अवस्थै थिएन । अझ लछार्दै जंगलतिर घिसारेर लैजान थाल्यो । उनलाई एक्कासी कताबाट साहस जुट्यो । तुरुन्तै उठेर भालुलाई अन्धाधुन्द मुक्का हान्न थाले । टाउकोबाट रगत बगेको कारण राम्ररी देख्न सक्ने अवस्था थिएन । मुख आँ...गरेर झम्टेको बेला बेलबहादुरको मुठ्ठी घडीसहित नाडीसम्म भालुको मुखभित्र पस्यो । त्यसपछि भालु भागेछ । दसैं परेकाले स्वास्थ्यचौकी बन्द भइसकेको थियो । पिउनले टाउकामा १ दर्जनजति टाका लगाइदिए । पछि घाउ पाक्यो । चिप्लेकिरा घोटेर लगाउँदा निको भयो रे । एक्यापले सहयोग गर्छ भन्ने सुनेका रहेछन्, नपाएपछि रिसाएछन् ।
त्यहाँ एसियाटिक ब्ल्याक बियर भनिने कालो कण्ठे भालु पाइने रहेछ । भालुले टाउको र अनुहारमा पञ्जाले आक्रमण गर्छ । मानिस भुइँमा लडेपछि मात्र टोक्ने गरेको बताइन्छ । खोप्रा लेकमा भेटिएका ट्रेकिङ गाइड नवीन पुनले एकपटक खोप्रा–नार्च्याङ लेकगाउँबीच २ वटा भालु जुधिरहेको देखे । भागदौडमा केही पर्यटक हल्का घाइते भए । त्यसपछि पर्यटकलाई नार्च्याङ लेकगाउँ लैजान छाडेको बताए । खोप्राबाट नार्च्याङ लेकगाउँ जाने बाटो छ । त्यो बाटोबाट आँखै अगाडिजस्तो अन्नपूर्ण प्रथम, निलगिरि, धौलागिरि, मानापाथी हिमाल देखिन्छ । तर अधिकांशजसो पर्यटक खोप्रा लेकबाटै फर्कन्छन् ।
भिडियो तथा तस्बीर
भालु नार्च्याङ लेकगाउँ नजिक जंगलमा उल्लेख्य मात्रामा पाइने अवस्था बुझियो । जंगलमा भालुलाई हम्मेसी क्यामेरामा कैद गर्न सकिन्न । दिनमा धेरैजसो समय दूरदराजको ओडारमा बस्छ । रातमा चर्न निस्कन्छ । अनुसन्धानमा भालु पाइन्छ भन्ने प्रमाणका लागि तस्बीर आवश्यक पर्छ । यसका निम्ति क्यामेरा ट्रयाप प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । म लगायत मिलन दाहाल (वातावरणविद, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण शाखा), राजेन्द्र बसौला (उप–प्राध्यापक, जन्तु विज्ञान, पीएन क्याम्पस पोखरा), कुलप्रसाद लिम्बु (सह–प्राध्यापक, जन्तु विज्ञान, स्नाकोत्तर क्याम्पस विराटनगर) त्यहाँ अवस्थित मिष्टी खोला जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधता अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न पुगेका थियौं । हामीले त्यस क्षेत्रमा ४ पटक जैविक विविधता अवलोकन गर्न पुग्नैपर्ने योजना बनाएका थियौं । हाम्रो काममा एक्यापको घान्द्रुक एकाइ ऐक्यबद्ध थियो । एक्यापले हामीलाई क्यामेरा उपलब्ध गराउने भयो । तर अनुमति प्रक्रिया पुरा गर्न झन्डै ६ महिना लाग्यो । अनुसन्धान टोलीमा एक्यापका अनुसन्धान अधिकृत रिशी बराल पनि थिए ।
हाम्रा सहयोगी झपेन्द्र बुदुजा पुन र शिव पाइजा पुनले क्यामेरा ट्रयाप जंगली जनावर हिँड्ने नाकामा १५, १५ दिन गरी थुप्रै ठाउँमा करिब ३ महिना राखे । यसबाट मृग, चितुवा, भालु लगायतका वन्यजन्तुका थुप्रै भिडियो र तस्बीर कैद भए । भालु चाहिँ ३ ठाउँमात्र फेला पर्‍यो । भालुको गतिविधि गाउँ नजिक पनि देखियो । जुन ठाउँमा भालु तस्बीर तथा भिडियो क्यामेरामा कैद भयो, त्यस ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा दिउँसै जान डराउन थाले । जंगलमा हिँड्दा भालुले कटुस, बाँझको फल खान रुखमा तिनका हाँगा भाँचेको प्रशस्तै देख्यौं । रुखमा हाँगा सोरसार गरेर फल खाँदो रहेछ ।
कुनै रुखमा ससाना हाँगा थुपारेको पनि देखियो । त्यो चाहिँ भालु सुत्ने ओछ्यान रहेछ । तेर्सो हाँगा वा हाँगा विभाजन भएको ठाउँमा सुत्ने ठाउँ बनाउँदो रहेछ । एक ठाउँ भालु मार्ने काठको भत्केको टहरोजस्तो पुरानो पासो पनि भेटियो । पासो थाप्न काठको टहरोजस्तो संरचनाभित्र भालुले खाने आहारा राखिँदो रहेछ । त्यसभित्र पसेर आहारा खाँदा टहरो भत्किई भालु मारिने प्रविधि अचम्मको देखियो । यसले भालुको चोरी सिकारी हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा नत समुदायका संरक्षणकर्मी पुग्छन् न त एक्यापकै प्रतिनिधि । खोप्रा नजिक डाँफे मार्न थापेका एक दर्जनजति पासा भेटिएको थियो ।
आईयुसीएनले कालो कण्ठे भालुलाई लोपोन्मुख अर्थात भोल्नुरेबल समूहमा सूचीकृत गरेको छ । बासस्थान विनाश र चोरी सिकारीका कारण यो भालु प्रजाति विश्वभर लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हो । यसको पित्त र छालाको अवैध व्यापार हुँदै आएको छ । विशेषतः यो वन्यजन्तुको पित्त पूर्वी एसियामा हजारौं वर्षदेखि परम्परागत औषधिका निम्ति उपयोग हुने गरेको पढ्न पाइन्छ । यसको प्रयोगबारे लेखिएको एक अभिलेख ईसापूर्व ६ सय ५९ वर्षअघि प्रकाशन भएको पाइन्छ । ज्वरो कम गर्न र कलेजो सुन्निएको निको पार्न यसको प्रयोग गर्ने गरिएको बताइन्छ । यसको प्रयोगले आँखा ज्योति बढ्ने र पत्थरी निको हुने बताइन्छ । यसको पित्तमा महत्त्वपूर्ण जैविक रसायनहरू पाइन्छ । यस्ता रसायनहरू मानव कलेजो उपचारमा उपयोगी सिद्ध हुने बताइन्छ । यसको पित्तमा पाइने रसायनले मधुमेह लगायत मस्तिष्क सम्बन्धी खतरनाक समस्या उपचारमा उपयोगी हुने जानकारी आईयुसीएनबाट सन् २०१६ मा प्रकाशित ‘युर्सस थिबेटानस ः द आईयुसीएन रेड लिष्ट अफ थ्रेटेन्ड स्पेसिस’ शीर्षक सामग्रीमा उल्लेख छ ।
कालो कण्ठे भालु इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, चीन, कोरिया, ताइवान, जापान, कम्बोडिया, म्यान्मार, रूस, थाइल्यान्ड, भियतनाममा पाइन्छ । यो वन्यजन्तु हाम्रा पहाडी तथा हिमाली भेगका सबैजसो संरक्षित क्षेत्रमा विशेषतः १४ सयदेखि ४ हजार मिटर उचाइसम्म पाइन्छ । सन् १९९९ मा बर्दियास्थित बबई उपत्यकामा पनि पाइएको थियो । नेपालमा यसको संख्या कमै भएकाले यसलाई संकटापन्न (इन्डेन्जर्ड) समूहमा सूचीकृत गरिएको छ ।
कालो कण्ठे भालु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग ऐन, २०२९ अनुसार नेपालको एक संरक्षित वन्यजन्तु हो । ऐन अनुसार भालु मार्ने वा यसको छाला लगायत वस्तु कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँदेखिा दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । भालु जोगाउन दण्ड सजायका प्रावधान राखेर मात्र सम्भव हुन्न । संरक्षण तथा दिगो उपयोगका नीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ । चीन तथा भियतनाममा भालुको पित्त उत्पादनको निम्ति भालु उद्यान सन् १९८० बाटै सुरु भएको हो । ती दुई देशमा १२ हजारजति भालु उद्यानमा छन् । चीनमा मात्र ६७ वटा भालु उद्यान रजिष्टर्ड भएको आईयुसीएनको उक्त सामग्रीमा उल्लेख छ ।
सरकारले माघ महिनामा जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, बँदेल, सर्प, गोही, भ्यागुता, पाहा र चरा प्रजाति पाल्न, मासु खान, बेचबिखन गर्न र विदेश निकासी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव अनुसार बनेको नियमावली कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन हुनसके मुलुकले प्रशस्त लाभ लिन सक्नेछ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयनले मुलुकमा जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगको नीति लागू भएको बुझाउनेछ । हामीले वन्यजन्तु संरक्षण गर्नेमात्र होइन, यसको दिगो उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यसैले अब सरकारले कालु कण्ठे भालुलाई पनि पाल्न र पित्त बेचबिखन गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ ०८:४६